Isimbi Isimbi Kuputika-chiratidzo Distribution Bhokisi Kuputika-chiratidzo mabhokisi izvozvi zvave kushandiswa zvakanyanya, uye munhu wese anotenga kutenga akaenzana mabhokisi, asi kutaura zvazviri, zvakanakisa kugadzirisa mabhokisi zvichienderana nemamiriro ako pachako. Munzvimbo zhinji, kushandiswa kwesimbi isina chinhu kuputika-chiratidzo distri ...
Mwenje Yekuputika-Uchapupu Ingashandiswa Kupi?
Nhasi ndichataura newe nezvenzvimbo dzinofanirwa kushandiswa mwenje unoratidza kuputika. Wati wamboona imwe nhau chaidzo? Semuenzaniso, chirimwa chemakemikari chakaputika, vashanu vakafa uye 1 vakakuvara, zvichingodaro. Zvinowanzo kukosha kuisa kuputika ...
Kutaura nezve "kuputika-chiratidzo chinobatanidza", munhu wese muindastiri anoziva nayo. Kune vazhinji vagadziri, vakadai saChengdu Taiyi. Kune mamwewo mazita akati wandei, akadai seanobatanidza, mapulagi, zvichingodaro. Kunyangwe ukandibvunza kuti sei wandidana zvakadaro, unogona kungoti mas ...
Nyowani Chigadzirwa Kurudziro- LED Kuputika-chiratidzo High Bay Mwenje Mune ino nyaya, ini ndoda kuzivisa kwauri chigadzirwa chedu chitsva: LED kuputika-chiratidzo chakakwira bay mwenje. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa inogona zvakare kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzine njodzi. Inofananidzwa nemagetsi ekuputika-chiratidzo, LED inopenya ...
Hunhu hweTaiyi zvigadzirwa zvinoputika-chiratidzo: 1. Kuchengetedza, Kuchengetedza magetsi, kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye kushanda kwakawanda. 2. Iko goko rakagadzirwa nepamusoro-isingagadziriswe aruminiyamu chiwanikwa ne-imwe-nguva kufa-kukanda. Iyo yepamusoro inocheneswa neiyo-yekumhanyisa kupfura blasting uye yakakwira-voltage electrostatic spray ...